Aspire- Shopify အမှတ်တံဆိပ်များ မြင့်မားတိုးတက်မှုအတွက် လွှမ်းမိုးမှုရှိသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ပလပ်ဖောင်း Martech Zone
သင်ဟာ စာဖတ်ဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ဆိုရင် Martech Zoneငါ့မှာ ခံစားချက်တွေ ရောထွေးနေတာ မင်းသိလား။ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး. သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းအပေါ် ကျွန်ုပ်၏အမြင်မှာ အလုပ်မဖြစ်ဟု မဆိုလိုပါ... ၎င်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ခြေရာခံရန် လိုအပ်နေပါသည်။ အကြောင်းရင်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်-
ဝယ်ယူမှု အပြုအမူ - Influencers များသည် အမှတ်တံဆိပ်ကို သိရှိနားလည်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်သော်လည်း ဧည့်သည်တစ်ဦးကို အမှန်တကယ် ဝယ်ယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန် ဆွဲဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အဲဒါက ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါ… သြဇာလွှမ်းမိုးသူအား လျော်ကြေးမပေးဘဲ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပိုမိုရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုသည့် ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်းမဟုတ်သည့်နေရာတွင်
အရှိန်အဟုန် - အရင်တုန်းက ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့ တွဲလုပ်ဖူးပြီး ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရလာဖို့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကို နွေးထွေးစေဖို့ တခါတရံ လနဲ့ချီ အချိန်ယူရတယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများသည် ချက်ချင်းရလဒ်များကို မမြင်ရသောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ တစ်နှစ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်မက လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ကျွန်ုပ်တွင် ရလဒ်ကောင်းများ ရခဲ့သည်... သို့သော် 1 နှင့် ပြီးသော စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုလိုသော သူများသည် ဘယ်တော့မှ အလုပ်မဖြစ်ပါ။
ခြေရာကောက် - ဖောက်သည် ခရီးစဉ်တိုင်းတွင် မတူညီသော အဆုံးအဖြတ်များ ရှိသည်... နှင့် ၎င်းတို့အားလုံးကို သြဇာလွှမ်းမိုးသူအဖြစ် ကျွန်ုပ်၏အလုပ်သို့ ပြန်၍ ခြေရာခံနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ တင်ဆက်မှု သို့မဟုတ် ပေါ့တ်ကာစ်တွင် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်ဖော်ပြနိုင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ပရိသတ်များသည် စိတ်ကြိုက် URL၊ လျှော့စျေးကုဒ်ကို အသုံးမပြုတော့ဘဲ အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်း ကြားသိရသည့်နေရာကို ထည့်ပါ။ ကုမ္ပဏီအတွက်ကတော့ ကျွန်တော်မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံပါပဲ။ ပြီးတော့ အကြွေးမတက်လို့ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။
အီလက်ထရွန်နစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ ကုန်ပစ္စည်းများ အတွက် ခရီးလမ်းသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အီလက်ထရွန်နစ် မားကတ်တင်းတွင် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်လည်း ၎င်းသည် မှန်ပါသည်။ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အခွင့်အလမ်းများတွင် တစ်နှစ်လျှင် YouTubers များသည် ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီ၍ ရရှိနေသည်... ၎င်းတို့သည် ရှိုးဖော်ပြချက်တွင် လင့်ခ်တစ်ခုကို ချပေးပြီး ၎င်းတို့၏နောက်လိုက်ထောင်ပေါင်းများစွာတို့သည် ထုတ်ကုန်ကို လှည်းထဲသို့ ထည့်နိုင်သည်။ ကလစ်နှင့် ပြောင်းလဲခြင်းတိုင်းကို ခြေရာခံနိုင်သဖြင့်၊ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသူနှစ်ဦးစလုံးသည် ပိုမိုသိရှိနားလည်မှုနှင့် အရောင်းမြှင့်တင်ရန် အချင်းချင်းပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် အလွန်ပျော်ရွှင်ကြသည်။
ကပ်ရောဂါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝများစွာကို အွန်လိုင်းတွင် ရွေ့ပြောင်းစေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ပြောဆိုပုံမှ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးဝယ်ပုံအထိ။ တကယ်တော့၊ IBM သည် ကပ်ရောဂါသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် e-commerce သို့ ပြောင်းလဲမှုကို အရှိန်မြှင့်ခဲ့ကြောင်း မကြာသေးမီက အစီရင်ခံခဲ့သည်။5အနှစ်.
IBM ၏ US လက်လီအညွှန်းကိန်း
ယနေ့ခေတ်တွင်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသိုင်းအဝိုင်းများသည် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလောကကို အုပ်စိုးပြီး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၏တန်ဖိုးကို စတင်သဘောပေါက်လာကြသည် — ၎င်းတို့၏ပရိသတ်များ၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိထားသည့် လူမှုမီဒီယာအသေးစားအကျော်အမော်များနှင့် ၎င်းတို့၏ခံယူချက်များနှင့် ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်များကို တွန်းလှန်နိုင်သည့်စွမ်းအားများရှိသည်။
သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူများနှင့် အမှတ်တံဆိပ်သံတမန်များ တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် သိသာထင်ရှားသော အကျိုးကျေးဇူးများ ရှိပါသည်။
စစ်မှန်သော ထောက်ခံချက်များ - သံတမန်တစ်ဦးသည် အမှတ်တံဆိပ်ကို အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ထိုအမှတ်တံဆိပ်အကြောင်း အကြိမ်များစွာ ပို့စ်တင်ကြလိမ့်မည် — တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းသည် #sponsored ပို့စ်မပါဘဲ — လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
မတူကွဲပြားသော ပရိသတ်များ - သံတမန်တစ်ဦးစီသည် ၎င်းတို့၏အသိုက်အဝန်းတွင် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုစီ၏ ပစ်မှတ်စားသုံးသူ တစ်ဦးစီကို ကိုယ်စားပြုပြီး အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်း ဆက်စပ်မှုရှိသော နည်းလမ်းဖြင့် ပြောဆိုကြသည်။
အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှု - သြဇာလွှမ်းမိုးသူများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာကို တီထွင်ထားသောကြောင့်၊ သင်သည် သင်၏ ချန်နယ်မှ အကြောင်းအရာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို သင်ဆန္ဒရှိသလောက် အတိုင်းအတာအထိ ချဲ့ထွင်နိုင်သည်... သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် အကောင်းဆုံးလွှမ်းမိုးမှုရှိသူများအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသည်။
အဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှု - Influencers များသည် သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို ၎င်းတို့၏ပရိသတ်အား ပြသရန် ထူးခြားပြီး ရင်းနှီးသောအခွင့်အရေးများကို ပေးစွမ်းသည့် တိုက်ရိုက်အစီအစဉ်များနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုများတွင် ကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေပြီဖြစ်သည်။
စရိတ်စက သက်သာသည်။ - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သံတမန်များသည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကို ပိုမိုသက်သာရာရစေသည်၊ အမှတ်တံဆိပ်များသည် ရေရှည်မိတ်ဖက်များအတွက် အပြန်အလှန်အားဖြင့် သံတမန်များနှင့် နှုန်းထားများကို သော့ခတ်ထားနိုင်သောကြောင့် အမှတ်တံဆိပ်များကို ပိုမိုရရှိစေပါသည်။
ထုတ်ပယ်ခြင်း - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သံတမန်များသည် အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းစုကြားရှိ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအတွက် သီးသန့်ဖြစ်ရန် သဘောတူကြပြီး အမှတ်တံဆိပ်များသည် ၎င်းတို့၏ဖိဒ်တွင် ကြော်ငြာနေရာအား လက်ဝါးကြီးအုပ်ရန် ခွင့်ပြုလေ့ရှိသည်။
Aspire- လွှမ်းမိုးမှုရှိသော စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည် အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် ကိုက်ညီသည်။
Aspire သည် အီလက်ထရွန်နစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အတွက် တည်ဆောက်ထားသော သြဇာကြီးမားသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပလပ်ဖောင်းသည် ပံ့ပိုးပေးသည်-
Influencer Discovery - ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူ6သန်းကျော်၊ အမှတ်တံဆိပ်ဝါသနာရှင်များ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အခြားအရာများကို ရှာဖွေပြီး ချိတ်ဆက်နိုင်မှု။
ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု - သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော ကမ်ပိန်းများ၊ တွဲဖက်ပရိုဂရမ်များ၊ ထုတ်ကုန်မျိုးစေ့ထုတ်ခြင်းနှင့် အခြားအရာများကို အကန့်အသတ်မရှိ ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲပါ။
အလိုအလျောက် ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ခြေရာခံခြင်း။ - ၎င်းတို့လိုချင်သော ထုတ်ကုန်များကို သင်္ဘောပေါ်တွင် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်စေပြီး ခြေရာခံအချက်အလက်ကိုပင် မျှဝေပေးသည် — သင့်လက်ထဲမှ လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို ထုတ်ယူပါ။
ပရိုမိုးရှင်း - အစုလိုက်သည် ပလပ်ဖောင်းမှထွက်စရာမလိုဘဲ သြဇာလွှမ်းမိုးသူတိုင်းအတွက် ထူးခြားသော Shopify ပရိုမိုကုဒ်များနှင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များကို ဖန်တီးပါ။
တိုင်းတာနိုင်သော ROI - ကလစ်များ၊ ပရိုမိုကုဒ်အသုံးပြုမှု၊ သို့မဟုတ် လက်လှမ်းမီမှုတို့ဖြင့် သင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပရိုဂရမ်အပေါ် ပြန်လာမှုကို တိုင်းတာပါ။ သြဇာလွှမ်းမိုးသူများသည် ရေတိုနှင့် ရေရှည်တိုးတက်မှုကို တွန်းအားပေးသည့် လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံကို ပြောပြပါ။
အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း - ထုတ်လုပ်ရန် မြန်ဆန်သော၊ ဈေးသက်သာပြီး အမျိုးမျိုးသော သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော အကြောင်းအရာများဖြင့် သင်၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ချန်နယ်များသို့ လူသားတို့ ထိတွေ့မှု ယူဆောင်လာပါ။ ထို့နောက် ကြော်ငြာများကို မြှင့်တင်ပါ။
Shopify ပေါင်းစည်းမှု - ထုတ်ကုန်များ ပေးပို့ခြင်းနှင့် ခြေရာခံနိုင်မှု သို့မဟုတ် ပရိုမိုးရှင်းများပေးပို့နိုင်မှုအပါအဝင် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် စိတ်ကြိုက်အတွေ့အကြုံတစ်ခုအတွက် Aspire ၏ Shopify ပေါင်းစပ်မှုကို မြှင့်တင်ပါ။
Aspire Demo ကို ကြိုတင်မှာယူပါ။
Tags: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သံတမန်ဝယ်ယူနှုန်းကုန်ကျစရိတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြားဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခြေရာခံအထူးနှုန်းများ codes တွေကိုshopifyshopify ပေါင်းစပ်မှု